तपाईलाई ट्विट गर्नका लागि यहाँ Lin 33 लिंक्डइन सल्लाहहरू छन्! | Martech Zone
तपाईलाई ट्विट गर्नका लागि यहाँ Lin 33 लिंक्डइन सल्लाहहरू छन्!
शुक्रवार, सेप्टेम्बर 26, 2014 आइतवार, जनवरी २,, २०१। Douglas Karr
धेरै दिनहरू छैनन् जुन म लिंक्डइनबाट अपडेट पढिरहेको छैन, लिंक्डइनमा कसैसँग जडान गर्दै, लिंक्डइनमा एउटा समूहमा भाग लिदै, वा लिंक्डइनमा हाम्रो सामग्री र व्यवसाय प्रचार गर्दै। लिंक्डइन मेरो व्यवसायको लागि जीवन रेखा हो - र म यस बर्षको प्रीमियम खातामा गरेको अपग्रेडसँग खुसी छु। यहाँ वेब मार्फत अग्रणी सोशल मिडिया र लिंक्डइन प्रयोगकर्ताहरूका केहि शानदार सुझावहरू छन्। टिप्स साझेदारी गर्न र मान्छेहरूलाई पछ्याउँनुहोस् जुन यति ठुलो जानकारी प्रदान गर्दछ!
प्रस्तुतकर्ताहरू र सार्वजनिक वक्ताहरूले विशेष गरी बोल्ने अवसरहरू सुरक्षित गर्न प्रभावशाली लिंक्डइन प्रोफाइल कायम गर्न आवश्यक छ, र श्रोताको साथ विश्वसनीयता निर्माण गर्न आवश्यक छ। तल दिइएका Lin 33 लिंक्डइन सुझावहरू सबै १ 140० क्यारेक्टर वा कममा संक्षिप्त गरिएको छ, सुझावहरूको माध्यमबाट द्रुत गर्न र लिंक्डइन समुदायमा सक्रिय हुनुको महत्त्वपूर्ण कार्यमा जानको लागि यसलाई सजिलो बनाउँदछ। लेस्ली बेलकनप
हामीले यी ट्वीटहरू थपेका छौं ताकि तपाईं सजीलै गर्न सक्नुहुनेछ क्लिक तिनीहरूमा ट्वीट गर्न उनीहरूमा!
ट्वीट: प्रस्तुतीकरण अघि, तपाईंको लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट गर्नुहोस्; सहभागीहरूले यसलाई तपाइँको विश्वसनीयता मूल्या cred्कन गर्न समीक्षा गर्नेछन्। @ Ethos3
ट्वीट: तपाईको वेबसाइटमा जेनेरिक लिंकलाई कार्यको लागि कलमा रूपान्तरण गर्नुहोस्, विशेष गरी कम्पनी प्रोफाइलहरूमा। @EntMagazine
ट्वीट: तपाईले प्रत्येक काम शीर्षक भित्र प्रदर्शन गरेका प्रत्येक भूमिकाको लागि प्रविष्टिहरू सिर्जना गर्नुहोस्। अधिव्यापन मितिहरू ठीक छ। @ फोर्ब्स
ट्वीट: गठबन्धन बन्न जडानहरू सिर्जना गर्न तपाईंको नेटवर्कसँग उच्च-गुणवत्ता जानकारी साझा गर्नुहोस्। @ReidHoffman
ट्वीट: लिंक्डइन लामो फारम पोष्टहरूको लागि आदर्श लम्बाई to०० देखि १,२०० शब्द हो। तपाईंको दर्शकहरूको लागि दर्जी लम्बाई। @SmallBizTrends
ट्वीट: "यो व्यक्तिलाई तपाईं कसरी चिन्नुहुन्छ" चरण छोड्नुहोस्। प्रोफाइलको सट्टा खोज परिणामहरूबाट "जडान" क्लिक गर्नुहोस्। @SylvanLane
ट्वीट: अर्को प्रयोगकर्ता वा कम्पनी तपाईको लिंक्डइन स्थिति अपडेटहरू हेर्न चाहनुहुन्छ? @ पोस्ट गर्नुहोस् जब तपाई पोष्ट गर्नुहुन्छ। @ हबस्पट
ट्वीट: वालफ्लावर नहुनुहोस्। तपाईको प्रोफाइल5गुना बढी देखिन्छ यदि तपाई सामिल हुनुभयो र समूहमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने। @ लिंक्डइन
ट्वीट: जब आफूलाई परिचय दिँदै, आत्मकेन्द्रित नहुनुहोस्। उदार, वास्तविक बन्नुहोस् र अर्को व्यक्तिमा फोकस गर्नुहोस्। @EmmieMartin
ट्वीट: लिंक्डइनमा नयाँ काम खोज्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो मालिकलाई थाहा नदिनुहोस्; तपाइँको गतिविधि प्रसारण बन्द गर्नुहोस्। @CareerOutcomes
ट्वीट: लिंक्डइन प्रयोगकर्ता जो नियमित रूपले उनीहरूको प्रोफाइल अपडेट गर्दछन् भर्तीकर्ताहरूसँग सम्पर्क राख्ने साथीहरूको भन्दा अधिक रोजगार प्रस्तावहरू पाउँछन्। @RimDey
ट्वीट: आफैलाई सेन्सर गर्नुहोस्। यदि तपाइँ यसलाई रोजगार अन्तर्वार्तामा भन्न चाहनुहुन्न भने, यसलाई लिंक्डइन समूह, वा पोष्टमा नभन्नुहोस्। @TechRepublic
ट्वीट: लिंक्डइनमा सक्रिय हुनको लागि समय तालिका। तपाईंको प्रोफाइल समीक्षा गर्नुहोस्, मनिटर अपडेट गर्नुहोस्, छलफलमा भाग लिनुहोस्। @ ABAesq
ट्वीट: इभर्नोट र लिंक्डइन एकीकृत; व्यापार कार्ड, लिंक्डइन जानकारी, र एक ठाउँमा नेटवर्कि notes नोटहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्। @Evernote
ट्वीट: तपाईको लिंक्डइन प्रोफाइल बिक्री उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको प्रोफाईलमा तपाईंको कम्पनीको बारेमा छोटो भिडियो थप्नुहोस्। @ सेलफोर्स
ट्वीट: लिंक्डइन समूहहरूमा मान थप्नुहोस्: दृश्य प्रस्तुतीकरणहरू साझेदारी गर्नुहोस् जुन समूह सदस्यहरूलाई रुचि दिन्छ। @JayBaer
ट्वीट: तस्विरहरूका साथ प्रोफाइलहरू हेर्ने सम्भावना बढी 14x छ। तटस्थ पृष्ठभूमिको साथ एक पेशेवर छवि प्रयोग गर्नुहोस्। @ लिंक्डइन
ट्वीट: प्रोफ़ाइल बजवर्ड्सलाई वेवास्ता गर्नुहोस्, जस्तै: रचनात्मक, र प्रेरित। विशेषणहरू न्यूनतम गर्नुहोस्। क्रियापदहरूमा जोड दिनुहोस्। @BusinessInsider
ट्वीट: स्वचालित निमन्त्रणा सन्देश प्रयोग नगर्नुहोस्: "म तपाईंलाई लिंक्डइनमा मेरो व्यावसायिक नेटवर्कमा थप्न चाहान्छु।" @ डेलीमुस
ट्वीट: "लिंक्डइनले पत्ता लगाएको छ कि प्रति महिना २० पोष्टहरूले तपाइँलाई तपाइँको अनौंठो श्रोताको percent० प्रतिशत पुग्न मद्दत गर्दछ।" @ बफर
ट्वीट: लिंक्डइनमा पोष्ट गर्नको लागि उत्तम समय: म Tuesday्गलबार र बिहीबार, स्थानीय समय बिहान7देखि9बिहानको बीचमा। @SocialMediaWeek
ट्वीट: छविहरूका साथ कम्पनी अद्यावधिकमा छवि बिनाको अद्यावधिकहरूको तुलनामा without%% उच्च टिप्पणी दर छ। @ लिंक्डइन
ट्वीट: लिंक्डइनको जडित अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्; यो पेशेवर सम्बन्ध विकास सरल बनाउन को लागी डिजाइन गरिएको हो। @ जिलियानाइल्स
ट्वीट: तपाई अद्वितीय हुनुहुन्छ। प्रमाणित गर्नुहाेस। तपाईंको हालको काम शीर्षकमा पूर्वनिर्धारितको सट्टा रचनात्मक हेडलाईन प्रयोग गर्नुहोस्। @मार्केटिंग शेर्पा
ट्वीट: भर्तीकर्ताहरू, सम्भाव्यता र सम्भावित साझेदारहरूले तपाईंलाई फेला पार्न मद्दत गर्छन्; तपाइँको लिंक्डइन प्रोफाइल भर कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्। @ यूएस न्यूज
ट्वीट: सफल लिंक्डइन सामग्री प्राय: लिस्ट फर्म्याटमा तयारी-गर्न-टेकवे प्रदान गर्दछ। @AndreyGidaspov
ट्वीट: डेन गुलाबीको नेतृत्व अनुसरण गर्नुहोस्; उसले लिंक्डइनको प्रकाशन प्लेटफर्मको लागि “TED वक्ताहरूको लागि tips सल्लाहहरू” पोष्ट पुनःप्रदर्शन गर्‍यो। @DanielPink
ट्वीट: तपाईलाई सम्मान गर्ने मानिसहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्। जब कसैले तपाईंलाई समर्थन गर्दछ एक धन्यवाद सन्देश पठाउनुहोस्। @ जेफबुल्लास
ट्वीट: लिंक्डइनमा स्वयम्सेवक अनुभव सूचीकृत गर्नुहोस्; Iring२% काममा लिने प्रबन्धकहरूले यसलाई औपचारिक रोजगारीको अनुभवको रूपमा महत्व दिन्छन्। @ लिंक्डइन
ट्वीट: "लिंक्डइन समूहहरूले तपाईलाई सामाजिक मिडियाको साथमा उत्तम व्यक्तिगत ब्रान्डिंग अवसरहरू प्रदान गर्दछ।" @ फोर्ब्स
ट्वीट: तपाईको कम्पनीमा भूमिका भर्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? भर्ती लिनेको सट्टा लिंक्डइनको भर्ती सेवामा सामेल हुनुहोस्। @ न्यूवाइम्स
ट्वीट: मूल सामग्री साझा गर्नुहोस्; "लिंक्डइनमा रोजगार सम्बन्धित गतिविधि भन्दा सामग्री अब छ गुणा बढी देखिएको छ।" @JasonMillerCA
ट्वीट: दृश्यहरू प्रयोग गर्नुहोस्; तपाइँको प्रोफाइल र लामो फाराम पोष्टहरूमा स्लाइड सेयर प्रस्तुतीकरणहरू र इन्फोग्राफिक्स एम्बेड गर्नुहोस्। @SMExaminer
टैग: एन्ड्रे गिडास्पोभबफरव्यवसायिक आन्तरिकदैनिक प्रयोगdaniel गुलाबीएम्मी मार्टिनEthos3Evernoteफोर्ब्सहबस्पटजेसन मिलरजय बेयरJeff Bullasजिलियन आइल्सLinkedInलिin्कडिन समूहहरूलिंक्डइन प्रस्तुतिकरणलिंक गरिएको प्रोफाइललिin्कडिन सल्लाहहरूविपणन शर्पामार्केटिंग शेर्पानयाँ यर्क समयरीड होफम्यानरिम डेबिक्री बलसोशल मिडिया परीक्षकसामाजिक मिडिया सप्ताहसिल्वान लेन
Douglas Karr Friday, September 26, 2014 Sunday, January 15, 2017
5 सुझावहरू सफलतापूर्वक ग्राहकमा तपाईंको अनलाइन संभावना रूपान्तरण गर्न
सामग्री निर्माणको D आयाम